High Quality အသံချဲ့စက်ရှဲလ် China Manufacturers & Suppliers & Factory
High Quality အသံချဲ့စက်ရှဲလ် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
(9များအတွက်စုစုပေါင်း High Quality အသံချဲ့စက်ရှဲလ် ထုတ်ကုန်များ)
အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting high ဖိအားမဂ္ဂနီစီယမ် Die
ချ. သေဆုံးမြင့်မားသောဖိအားအောက်၌လိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်တစ်ဦးမှိုသို့မဟုတ်မှိုသို့သွန်းသောသတ္တု၏ဆေးထိုးပတျသကျတဲ့တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်, အသားတင်-ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်ကအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်သို့ကာစ် Industries, Applications...
High Quality Injection ထုတ်ကုန်များ
မြင့်မားသောခွန်အားဖြစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းများကို ABS အားဖြင့်ဆေးထိုးတန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ ကို ABS ပစ္စည်းမြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိနှငျ့လွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ injection တန်ဆာထိုကဲ့သို့သောစက်မှုဝါယာကြိုး spool, ထုပ်ပိုး, ပုလင်းထုပ်, မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ, gameboys,...
OEM Service ကို High Quality CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ
မြင့်ဖိအား ချ. အစိတ်အပိုင်းများဟာသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်အားဖြင့်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားချထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာများမှာသေဆုံးသည်။ ဒါဟာသတ္တုများပုံသွန်းမှိုအသုံးပြုတဲ့ဖိအားသတ္တုများပုံသွန်းစက်ဖြစ်ပါတယ်။...
high-quality အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Injection ကိုတန်ဆာ
PA ဆိုပြီးဆေးထိုးမှိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ, ဆန့, compression ရှိပြီး, ဝတ်ဆင်ယဉ်။ ဆန့-oriented နိုင်လွန်မြင့်မားဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပြီးသံမဏိကြောင်းနီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးပုံဆောင်ခဲမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်ခိုင်မာသောနှင့်အနိမ့်ပွတ်တိုက်ကိန်းရန်, နိုင်လွန်ထူးချွန် wear ခုခံနှင့်...
High Quality အသံချဲ့စက်ရှဲလ်
High Quality အသံချဲ့စက်ရှဲလ်၏ injection
High Quality အကြီးစားစက်မှုထုတ်ကုန်များ
semi Solid ကာစ်တင်စက်များ